Tag: efamira | Martech Zone
Zoma, Febroary 26, 2021 Alakamisy Febroary 25, 2021 Douglas Karr
Androany maraina aho dia nihaona tamin'ny mpanjifa iray izay misy toerana marobe amin'ny orinasany. Raha nahatsiravina ny fahitana ara-organika azy ireo ho an'ny tranonkalany, nahafinaritra ny fametrahana azy ireo ao amin'ny faritra Google Map pack. Nuansa tsy azon'ny orinasa maro io. Ny pejin'ny valin'ny motera isam-paritra dia misy fizarana telo lehibe: Fikarohana karama - enti-milaza soratra kely milaza hoe Ad, ny doka dia mazàna no misongadina eo an-tampon'ny pejy. Ireo teboka ireo
Lisitry ny haben'ny doka mahazatra amin'ny doka an-tserasera
Talata, Jolay 21, 2015 Alatsinainy Oktobra 12, 2015 Douglas Karr
Ilaina ny fenitra raha ny momba ny doka fanaovana dokambarotra an-tserasera sy ny haben'ny fiantsoana-to-hetsika. Ny fari-pitsipika dia ahafahan'ny famoahana tahaka ny antsika hanara-penitra ny maodelinay ary hiantohana ny fisian'izany fampandehanana dokam-barotra izay mety efa noforonin'ny mpanao dokambarotra sy nosedraina manerana ny harato. Amin'ny alàlan'ny Google Adwords ho tompon'ny fametrahana doka, ny zava-bitan'ny doka isaky ny Google dia mibaiko ny orinasa. Size fanaovana fampisehoana ambony eo amin'ny Google Leaderboard - 728 teboka ny sakany, 90 teboka ny halavany - antsasaky ny pejy -